Kulan looga arrinsaneyey xagjirnimada dhallinyarada reer Yurub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhallin-yaro u baqooshey Suuriya si ey ula dagaalamaan maamulka Asad. AP Photo/Khalil Hamra
Kulan looga arrinsaneyey xagjirnimada dhallinyarada reer Yurub
Waxey halis ku yihiin nafsaddooda iyo ammaanka dalka
La daabacay torsdag 30 januari 2014 kl 13.30
Magaalada Danhag ee dalka Holan ayuu ka furmayaa kulan socon doona laba maalmood maalinta khamiista bishuna tahay 30 iyo maalinta jimcada xigta oo bisha jannaayo tahay 31 oo ey ka qeyb geleyaan xubno matalaya toban magaalo oo ey ka mid tahay magaalada Örebro. Kulankan oo ey qaban-qaabisay hayad lagu magacaabo Radikalisation Awareness network - Shabakadda ka war-haynta noqoshada xag-jir-nimada ama shabakadda ka hor-tagga xag-jireeynta, sida uu noo sheegay Mahdi Warsame, ahna gudoomiyaha xarunta dhexee dhaqanka ee Örebro, laguna magacaabo Afrikas Horn - Geeska afrika oo ka mid ah xubnaha magaalada Örebro uga qeyb-geleya kulanka:
Sida aad marar badan ku maqasheen barnaamijyada ka baxa idaacadda iney sannadkii ina dhaafay ka tageen magaalada Örebro dhallin-yaro tobaneeyo ku dhowaad ah, oo ku dhaqnaa magaalada Örebro iney u amba-baxeen dalka Suuriya , si ey uga garab dagaallamaan ururrada xag-jirka ah ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida. Hase yeeshee ey badankood dhallin-yaradaasi dib ugu soo laabteen carrigaa. Waana sabab ka mid ah sababaha keentay ayuu qabaa Fredrik Malm inuu istaago dhallinyaradii magaalada ka socdaali jirtay ee u socdaali-jirtey dalka Suuriya:
- Saameeyn ayay ku yeelan kartaa in laga soo laabto. Waxaa dhici karta in waayo-arag-nimo looga soo heley in aaney falalkaasi aheyn sidii la moodayey. In aaney sidaa u qurux-badneyn ama u sahlaneyn sidii horay looga heeystey, sida uu sheegay.
Soo noqoshada dhallin-yarada u ambabaxdey sidii ey qeyb uga noqon laheyd dagaalka sokeeye ee Suuriya ka aloo-san ayaa sidoo kale waxaa laga muujiyey, sida war-bixinno ka soo baxey hayadda nabad-sugidda Säpo iney caqabad ku noqon karaan marka laga yimaado nafsaddoodda iyo sidoo kale ammaanka dalka kolka ey dib ugu soo laabtaan. Waana fikir uu la qabo Fredrik Malm:
- Dhanka bani'aadmi-nimada marka laga eego sida ey dhallaankaasi ula qab-san lahaayeen bulshada ey la dhaqan yihiin. Waa dhallin-yaro leh waalidiin, iyag mustaqbalka noqon kara waalid. Looga fadhiyo iney shaqeeystaan. Maxey la soo kulmeen oo dhaawacyo u geey-san kara muddadii ey falalkaa ku guda jireen.
- Dhanka kale waxaa jirta cabsi laga qabo iney soo qaateen tababarro ciidan iyo mid hubeed oo ey dib ugula soo laaban karaan si ey ugu wax-yeeleeyaan waddammadii ey ku dhaqnaayeen, sida uu sheegay Fredrik Malm. Fikirkaa ayuu isna la qabaa Mahdi Warsame iyo in safarrada noocani ah ee dhallin-yaradu ugu baqoosho halis u keeni karaan naftooda iyo midda dalka ey ku dhaqan yihiinba.
Kulankan haddaba socon doona labada maalmood oo ey isugu imaneyaan xubno ka kala socda tobanka magaal, midkaasi oo looga xaajooneyo, isla-markaana la isku dhaafsaneyo afkaaraha iyo waayo-aragnimada laga heley howlihii la xiriirey dhallin-yarada Yurub ka ambabaxda ee u baqoosha dalka Suuriya iyo sidii ey dagaalka sokeeye uga qeyb qaadan lahaayeen, sida uu sheegay Mahdi Warsame, guddoomiyaha xarunta dhexe ee dhaqanka Örebro.